Gaza : Geeridu ma aha guuldarro
Billowga qarniga 21aad, waxaan ku sugannahay adduunyo ilbax ah, naxariis badan, oo noole iyo manooleba in lagu xadgudbaa ay xaaraan tahay, xuquuqdooduna dhowrantahay. Waxaanan joognaa adduunyo arxandaran oo la isku dhiirrigeliyo in dhulka lagu malaaso magaalooyin ay malaayiin qofood ku noolyihiin, caruur iyo cirroole midkoodna aan la badbaadin. Kaaga sii darane in dadka la dulminayaa ay is difaacaan waa dambi argagixiso, halka kuwa wax dabargoynaya dooddooda la xalaaleynayo. Waa duni dadka qaarkiis dilkiisa iyo darxumeyntiisa darajo iyo dallacaad lagu helo, taasina ay keentayba in gumaadkooda la isku garbiyo.
Aakhiro waa xisaabteedee, ceebta iyo waji gabaxa ifka ku haysta guud ahaan umadda Muslimiinta ah ee walaalahood maanta lagu xasuuqayo marinka Gaza ee Falastiin, miyaysan aheyn tii Nabigeennii Muxamed (nnkh) uu ka digay 14 Qarni ka hor? Adduunyadoo la jeclaado iyo geeridoo la dhibsado, sow natiijadeedii ma noqon; ummaddii muslimiinta aheyd ee adduunka ugu badneyd in itaalkeedii uu ku soo ururo indho guluc ka siin iyadoo maalinba afartii xulka aheyd agteeda lagu dubanayo?
Gabayga cusub ee Gaza, oo soo baxay 15kii Jannaayo, 2009ka, wuxuu ku saabsanyahay xasuuqa naxariisdarrada ah ee lagu hayo shacbiga Gaza,waxaanan Rabbi (swt) ka baryayaa in uu naxariistiisa waasica ah u soo dedejiyo, dulmiga ku habsadayna degdeg uga dulqaado.
Gobonnimo inaan daafacnaa wey gudboontahaye
C/Qaadir Maxamed C. Cibaar
GUUBAABO: Gabay Cusub - Dec 2008 Akhris/Dhegeysi..